နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင်၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင်၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: နိုဝငျဘာ 27, 2018 In: AppointmentNo Comments
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကော်မရှင်၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ H.E. Mr. NingJizhe ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင် (၈)ဦးပါ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား၂၆-၁၁-၂၀၁၈ ရက်၊ (တနင်္လာနေ့)၊ (၁၆:၀၀)နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ်၂၀၁၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ကပေကျင်းမြို့၌ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတို့ အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် မြန်မာ-တရုတ် စီးပွားရေး စင်္ကြံ ပူးတွဲတည်ထောင်ရေး ဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချွန်လွှာ အရ နှစ်ဖက်ပြည်သူများအတွက် ဆောလျင်စွာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မည့် စီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး အတွက် ရှေ့လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကအဆိုပါ စီမံကိန်း များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်း (MSDP) ၏ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ ဦးစားပေးအစီအစဉ်များနှင့် လျော်ညီစွာဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် နှစ်ဖက်ပြည်သူများ၏ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှင့် ပြည်တွင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေများနှင့်အညီစနစ်တကျ တိကျမှန်ကန်စွာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် သွားကြရန် လိုအပ်ကြောင်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဆွေးနွေးပွဲသို့ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာသန်းမြင့်၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံအမတ်ကြီးH.E. Mr. Hong Liang နှင့် တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျနှငျ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ အမြိုးသားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးနှငျ့ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေးကျောမရှငျ၏ ဒုတိယဥက်ကဋ်ဌ ဖွဈသူ H.E. Mr. NingJizhe ဦးဆောငျသညျ့ အဖှဲ့ဝငျ (၈)ဦးပါ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား၂၆-၁၁-၂၀၁၈ ရကျ၊ (တနင်ျလာနေ့)၊ (၁၆:၀၀)နာရီတှငျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး၏ဧညျ့ခနျးမ၌ လကျခံတှဆေုံ့ခဲ့ပါသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့စဉျ၂၀၁၈ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ ၉ ရကျနကေ့ပကေငျြးမွို့၌ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့ သမ်မတနိုငျငံတို့အကွားလကျမှတျရေးထိုးခဲ့သညျ့ မွနျမာ-တရုတျ စီးပှားရေး စင်ျကွံ ပူးတှဲတညျထောငျရေး ဆိုငျရာနားလညျမှုစာခြှနျလှာအရနှဈဖကျပွညျသူမြားအတှကျ ဆောလငျြစှာ အကြိုးဖွဈထှနျးစနေိုငျမညျ့ စီမံကိနျးမြားအကောငျအထညျဖျောနိုငျရေးအတှကျ ရှလေု့ပျငနျး အစီအစဉျမြားကိုဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျကအဆိုပါ စီမံကိနျး မြားကို အကောငျအထညျဖျောရာ၌ မွနျမာနိုငျငံ၏ ရရှေညျဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးစီမံကိနျး (MSDP)၏ လုပျငနျးအစီအစဉျမြား၊ ဦးစားပေးအစီအစဉျမြားနှငျ့ လြျောညီစှာ ဆောငျရှကျသှားရနျနှငျ့ နှဈဖကျပွညျသူမြား၏ ရရှေညျအကြိုးစီးပှားအတှကျ အထောကျ အကူဖွဈစရေနျနှငျ့ ပွညျတှငျး လုပျထုံးလုပျနညျးဥပဒမြေားနှငျ့အညီစနဈတကြ တိကမြှနျက နျစှာညှိနှိုငျးဆောငျရှကျသှားကွရနျလိုအပျကွောငျးထညျ့သှငျးဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
ဆှေးနှေးပှဲသို့ စီးပှားရေးနှငျ့ကူးသနျးရောငျးဝယျရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဒေါကျတာသနျးမွငျ့၊ စီမံကိနျးနှငျ့ဘဏ်ဍာရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီးဦးစိုးဝငျး၊ အပွညျပွညျဆိုငျရာပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထောငျစုဝနျကွီး ဦးကြျောတငျ၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာတရုတျသံအမတျကွီးH.E. Mr. Hong Liang နှငျ့ တာဝနျရှိသူမြား ပါဝငျတကျရောကျခဲ့ကွသညျ။